OP / ED | The FNG
Category Archives: OP / ED
June 7, 2017 by 21 South News
By Francis Wade Francis Wade isajournalist and the author of the forthcoming ‘Myanmar’s Enemy Within: Buddhist Violence And The Making Of A Muslim Other’ (Zed Books, August 2017)
December 2, 2015 by 21 South News
ရန်ကုန် မြို့အနောက် မြောက် ဖက် တွင် ရှိ သည့် အင်းစိန် ထောင် တွင် ဖြစ်ပါသည်။ အချိန် ကား စစ်အစိုးရ အုပ် ချုပ် ထောင် စု နှစ် တစ်ခု မှာ တစ် ခု သို့[…]
ရသ ကဏ္ဍ, ဖျော်ဖြေရေး, ရောက်တတ်ရာရာ
August 17, 2015 by 21 South News
(ဒီချုပ်အာဏာရရေး အပေါ် မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမား ထားနေကြဆဲဖြစ်သည့် ဒီမိုကရေစီ မိတ်ဆွေများသို့) အမှန်တော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အာဏာရလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် မယုံကြည်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုရွေးကောက်ပွဲအတွက် တက်ကြွနေသူတွေက ဒီချုပ်အာဏာရခဲ့သော်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ တက် ကြွနေကြတာ ဖြစ်တော့ ဒီချုပ်အာဏာရခဲ့သော် ဘာဖြစ်နိုင်သလဲဆိုတာကို ကျနော်တွက်ချက်ပြချင်ပါတယ်။
သတင်း ဆောင်းပါး, News, OP / ED
July 31, 2014 by 21 South News
By DAN LEVINJULY 28, 2014 MANDALAY, Myanmar — Although Than Than Aye,astreet vendor, isahalf-century old, few if any wrinkles mar her complexion. Her secret? A yellowish […]
June 26, 2014 by 21 South News
လင်းထင် – ဆဲဗင်းဂျူလိုင် နှစ်ပတ်လည်ကို အခုလိုနှစ်မျိူးမှာ ပိုလို့တောင် အထူးသဖြင့် သဘောထားပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်ဝက်က ဖြစ်ရပ်ဆိုးအပေါ် သမိုင်းနီတိထုက် ပြန်ပြောင်းဆင်ခြင် နှလုံးသွင်းသင့်တယ်။
ကြောင်ဖြူဖြူ၊ နက်နက် အသားစားတတ်တာတော့ အတူတူဘဲ
ခမ်းဝင်း ၁၉၅၈ ခုနှစ် စစ်ဘက်အာဏာသိမ်းပွဲ ကျင်းပချိန်မှ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ ဖြိုးရေးပါတီ အစိုးရအဖြစ် မပေါ်ပေါက်မီအချိန်အထိ ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့ ပြောပေါက်တွေနဲ့ 
သတင်း ဆောင်းပါး, OP / ED
February 10, 2014 by 21 South News
“သူတို့ဖို့လဲ….အမျှဝေပါ“ သမ်ိုင်းဆိုတာဖျောက်လို့မရဘူးတဲ့ …။ သိပ်ရတာပေါ့ … လောကကြီးမှာ…လူသိတဲ့သမိုင်းထက်…လူမသိတဲ့သမိုင်းက အဆပေါင်းများစွာပိုတယ်ဆိုတာကို…နားမလည်နိုင်တဲ့သူတွေပြောကြတာပါ ။ လူသိတဲ့သမိုင်းတောင် ဘယ်သူတွေရေးလို့ ဘယ်လောက်မှန်တယ်ဆိုတာ ရှိသေးတယ် ။
February 4, 2014 by 21 South News
Ratih Hardjono, Jakarta | Opinion The pressure on Aung San Suu Kyi as the sole symbol of the Myanmar democratic movement showed itself last December when atanews conference […]
မိုးအေး၊ သူရိန် နဲ့ သမတ ဦးသိန်းစိန်……… ကိုညို။
January 30, 2014 by 21 South News 1 Comment
ကိုညို မိုးအေး (၁၉၉၀ နိုဝင်ဘာ) ကျနော့တကိုယ်လုံးရက်ပေါင်းများစွာရေးမချိုးရလို့ အနံ့အသက်တွေဆိုးဆိုးဝါးဝါးထွက်နေတယ်။
ဟာဂျူလီပြောတဲ့ သီတဂူအကြောင်း တစေ့တစောင်း
January 23, 2014 by 21 South News 1 Comment
နာမည်ကြီး ဘက်စုံကျွမ်းကျင်တဲ့ မီဒီယာသမားကြီး ဆရာ ဟာကျူလီ (ကသာ) ရဲ့ သီတဂူ ဆရာတော်ကြီးနဲ့ ၎င်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပုံ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်မှန်ကို တင်ပြထားချက်ကို ပြန်လည် ဖော်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပေးစာ, OP / ED
January 17, 2014 by 21 South News
အေးအေးစိုးဝင်း ချားလ်စ် ဆမ်(မ်)နာ ဂျန်န၀ါရီ ၆ ရက် ၁၈၁၁ မှာမွေးသည်။ ဒီနေ့ သူ့ မွေး နေ့။ မတ် ၁၁ ရက် ၁၈၇၄ မှာ သေဆုံးသည်။ မန်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်မှာ မွေးဖွား ကြီးပြင်းခဲ့သည်။ကလပ်ဆစ်ကယ်ပညာရေး ရခဲ့သည်။
ဘာသာပြန်, OP / ED
January 12, 2014 by 21 South News 1 Comment
ဇော်ဝင်း ၊၊နာမည်နဲ့ လုပ်ရပ် ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်တဲ့ အဖွဲ့တဖွဲ့ကတော့ NED ပါ။ နာမည်က National Endowment for Democracy ဒီမိုကရေစီ ကူညီထောက်ပံ့ရေး အဖွဲ့ပါ။
နိုင်ငံရေး သမား ရောင်းရန်ရှိသည် အပိုင်း ၃ (ငွေကြေး၊ အာဏာနဲ့ OSI )
January 11, 2014 by 21 South News
ဇော်ဝင်း (၈၈ ကျောင်းသားဟောင်း) လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်တုံးက ဗြိတိသျှသံရုံး ဧည့်ခန်းမှာ ထားလေ့ရှိတဲ့ စာအုပ်တအုပ်ကို အမှတ်ရမိတယ်။ အဲဒီစာအုပ်ကတော့ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်း /လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်း